Hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo isku afgartay in doorashooyinka dalka dib loo dhigo ilaa labo bilood - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaHoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya oo isku afgartay in doorashooyinka dalka dib loo dhigo ilaa labo bilood
August 6, 2016 Puntland Mirror Somalia 0
Shirka madasha qaran ee u dhaxeeya hoggaamiyaasha siyaasada Soomaalida.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Hoggaamiyaasha siyaasada Soomaaliya ayaa heshiis hor u dhac ah ku gaaray in doorashooyinka dalka dib loo dhigo ilaa iyo laba bilood.
Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali oo la hadlay laanta Af-Soomaaliga VOA ayaa sheegay in qiyaastii labo bilood ay qaadanayso wakhtiga dib loo dhigayo doorashooyinka.
shirka madasha oo u dhaxeeya madaxda dowlada federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa la filayaa inuu ilaa maanta soo gababgaboobo.
Dhawaan ayay ahayd markii ilo-wareed diblomaasi oo lagu kalsoonaan karo ay warsidaha Puntland Mirror u sheegeen in doorashooyinka dalka ay dib u dhacayaan ilaa iyo dabayaaqada sanadkan 2016.